Vachena tii Vagadziri - China White tii Fekitori & vatengesi
Green tii hombe Buddha 2021 nyowani tii
Big Buddha Longjing inogadzirwa muXinchang County, Zhejiang Province, iro guta rekumusha kwetii muChina, uye inonyanya kugoverwa munzvimbo dzakakwirira tii nzvimbo pamusoro pemamita mazana mana pamusoro pegungwa. Icho chigadzirwa chakagadzirwa nevechidiki mabhudzi uye mashizha kubva kumakomo marefu asina kusvibiswa-asina tii mapindu, ayo anonatswa nehunyanzvi senge yekuparadzira, de-greening, kuparadzira, kuomesa, sieving uye kuumba. Chimiro chakatsetseka uye chakatsetseka, chakapinza uye chakatwasuka, ruvara rwakasvibira uye rwegirinhi, hwema hwacho hunogara kwenguva refu, hune hwema orchid hushoma, uye kuravira kwacho kuri kutsva uye kunotapira. Iyo muto yero uye yakasvibira uye inopenya. Pasi peshizha iri nyoro uye inopenya. Iyo ine chaiyo gomo tii Flavour.
Biluochun tii yaive nemukurumbira kutanga kwaSui neTang Dynasties, iine nhoroondo inopfuura chiuru. Iyo ndeimwe yetii dzakakurumbira munyika medu uye ndeyeti green tii. Ngano dzinoti Emperor Kangxi weQing Dynasty akashanyira Suzhou kumaodzanyemba ndokuipa zita rekuti "Biluochun". Nekuda kwenzvimbo yakasarudzika yenzvimbo yeDongting Mountain, maruva ari kuenderera mukati memwaka wese, uye miti yetii nemiti yemichero inodyarwa pakati payo, saka Biluochun tii ine yakakosha ruva hwema.
Huo Shan Huang Ya China Yera Tea
Huoshan Yero Bud rudzi rweyero tii, inonyanya kugadzirwa muDongliuhe Village, Mozitan Town, Huoshan County, Anhui Province, Dahuaping, Manshuihe, uye Jiugongshan muShangtu Guta. Huoshan yero buds yakatanga pamberi peTang Dynasty. Iyo tii mitsetse yakasangana, yakaumbwa seshiri rurimi, goridhe muvara, iine pekoe inoburitsa, muto unoita yero-girinhi muvara, mellow uye wakapfuma, ine chestnut hwema.
Chinese Green Tea Flecha Hunhu Muchena Tea Angie White Tea
Anji chena tii ndeyegirini tii, imwe yematanhatu makuru tii muChina. Iyo nyeredzi inomuka yeZhejiang yakakurumbira tii. Icho chiratidzo chenyika chinoratidza chigadzirwa uye ndecha "tembiricha yakadzika inononoka", ine chikumbaridzo chingangoita 23 ° C. Kugadzirwa kwe "chena tii" kubva pamiti yetii ipfupi, kazhinji ingangoita mwedzi mumwe chete. Chimiro cheAnji chena tii yakatwasuka uye yakati sandara, kunge orchid; iwo ruvara rwakasvibirira rweemaradhi, uye pekoe iri pachena; mashizha emashizha akaita segoridhe rakashongedzwa nemashizha matema nemiseve yesirivha mukati, izvo zvinofadza kwazvo.